Home / Blog / Fanamboarana ny fandroana, kapoka 5 hahatratrarana fiovana mahafinaritra
2021 / 04 / 10 FisokajianaBlog 3753 0
Raha lazaintsika hoe faritra iza ao an-trano no be pitsiny indrindra sy lafo indrindra novaina, mety hamatotra ny lakozia amin'ny lakozia aloha. Te hamorona fahatsapana zokiolona ao amin'ny trano fidiovana, fa tsy te-hanao fifanarahana lehibe, inona ny fomba tsotra sy mora hanaovana izany? Amin'ity laharana ity, manampahaizana manokana amin'ny haingon-trano fandroana izahay, na dia tsy misy fandroana fidiovana, zava-poana marbra ary fitaratra tsy misy dikany taloha aza dia azonay ampiasaina ihany koa ireo tetika kely dimy ireo hanatsarana ny habaka ao amin'ny fandroana.
Mbola mampiasa ilay boaty savony plastika ratsy tarehy amin'ny savony? Aza variana loatra amin'ny lalanao. Ireo fitaovana mifanentana mora vidy sy mora vidy ireo dia azo ariana ary soloina amin'ny fanangonanao ireo kaontenera tsara tarehy rehetra.
Tavoahangy fitaratra tsara ho an'ny fanosotra landihazo sy baolina landihazo, ary lovia kely marefo amin'ny savony koa tena mety. Ny tsara indrindra, fonosina ao anaty lovia fitehirizana izy rehetra ary hilamina kokoa ny zava-poana. ▼
Mampiasà rihitra vato kely hitahirizana borosy fikosoham-bolo na baolosy fandroana. ▼
Azo ampiasaina tsara ny vilia baolina sy lovia kely. ▼
Raha tsy te-ho lena ny trano iray manontolo dia tena ilaina ny fandroana tsy mihetsika amin'ny fandroana, satria ny fahadiovana sy ny fahasalamana no fototra. Raha te hanamboatra kanto kokoa ny trano fidianao ianao dia azonao atao ny manolo ny andraikitry ny tsihy tsy mihetsiketsika amin'ny kapoka mahafinaritra. ▼
Manahy ve ny karipetra mando foana ary mora hiteraka bobongolo sy agila? Avy eo dia manaova asa tsara amin'ny fanasarahana ny lena amin'ny maina, ary avy eo manasa sy manova azy tsy tapaka! ▼
Ny fitaratra zava-poana ao amin'ny trano fandroana dia zavatra manan-danja izay taratry ny firafitra. Raha manify loatra ny fitaratra dia hanana fahatsapana trano fanofana izy. Noho izany dia ilaina ny misafidy fitaratra fiakanjo kanto misy sisintany.
Na dia tena tsotra aza ilay milentika, fa miaraka amin'ny fitaratra fiakanjo fomba eropeana, dia lasa lasa manana kalitao ny habaka iray manontolo. ▼
Fitaratra mahitsizoro sy malala-tanana miaraka amin'ny vatan-kazo, ny loko hazo am-boalohany amin'ny endriny ary ny loko fotsy fotsy madio mifameno tena kanto. ▼
Raha tsy afaka mividy fitaratra mety ianao dia mety mila DIY vata amin'ny tady mololo. ▼
Ny volamena na varahina dia aristokratika ary azo ampiasaina hanatsarana ny fahatsapana ny fahalehibiazana amin'ny fomba mahomby. Ny fiaviany maivana miaraka amin'ny volamena mamirapiratra mamirapiratra dia toa mendri-kaja sy vehivavy, fa kosa ny maizina miaraka amin'ny volamena mavesatra mavesatra dia mendri-kaja sy atmosfera. Ny kojakoja fandroana sy ny fitaratra fandroana no mety indrindra amin'ny volamena, ny vokatra tokana mifandraika amin'izany koa mora vidy ihany koa.
Ao ambadiky ny fotsy madio dia mahasarika maso ny mikasika ny volamena mamirapiratra. Na izany aza, raha maizina ny toerana, dia very mora foana ireo zavatra volamena mamirapiratra be loatra any aoriana. ▼
Rehefa maizina na maivana ary mifangaro mifangaro ny habaka, dia toa miloko kokoa ny fisafidianana volamena mavesatra kokoa. Mandritra izany fotoana izany, andiana singa volamena miaraka amina vanim-potoana bebe kokoa, fa koa avy any aoriana mba hanasongadinana ny fananganana fahatsapana ambaratongam-pahefana. ▼
Fianakaviana maro no miraharaha ny safidin'ny jiro ao amin'ny trano fidiovana. Ampiasao ny bara fandroana fa tsy jiro ambonimbony, na ampiasao ny kabinetra tsy misy fotony miaraka amin'ny loharano maivana ho azy fa tsy jiro rindrina, fa tsy fitaterana. Ny fahatsapana ny habakabaka mandroso dia avy amin'ny fiheverana ny antsipiriany, jiro tsara tarehy sy lanternam-borona nateraky ny kalitaon'ny fanatsarana, azo antoka fa mendrika eritreritra.
Jiro lehibe + jiro kely maromaro, loharano jiro maromaro hamoronana atmosfera mahafinaritra. ▼
Ny jiro plastika miorina amin'ny polyhedron dia tsara tarehy ary tsy sarotra loatra. ▼
Raha lehibe ny trano fidianao, mifidiana chandelier tsara tarehy, chandelier lehibe misy lamina sarotra, ary ampifanaraho amin'ny vorona sy voninkazo ny sary an-tsaina mba hamoronana fahatsapana nofinofy eo noho eo. ▼
Jiro rindrina manify sy kanto. ▼
Raha tsy te hanimba ny fahatsoran'ireo rindrina efatra ianao dia afaka mampiasa chandelier kely fa tsy jiro amin'ny rindrina. ▼
Fitsaharana ihany koa ny fandroana, ary ny fahazavana be loatra mahatonga ny olona tsy hifoha. Raha te hiala sasatra amin'ny hafainganam-pandeha ianao, mandrehitra labozia ary mankafy fotoana fandroana manokana. ▼
Previous :: Ny "Sarobidy" ao amin'ny efitrano fandroana, mahavariana loatra, misy ny karazana mety ao an-tsainao? Next: Ahoana ny fametrahana ny faritra fanasan-damba amin'ny fomba mahomby kokoa? Manomboha amin'ireto lafiny efatra ireto, hahazoana antoka fa tsara sy tsara no ampiasaina!